Wasiir dowlaha Warfaafinta Puntland oo la kulmay Safiirada Masar,Talyaaniga iyo Sudan ee Soomaaliya[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Wasiir dowlaha Warfaafinta Puntland oo la kulmay Safiirada Masar,Talyaaniga iyo Sudan ee Soomaaliya[Sawirro]
MUQDISHO – Wafdi uu hoggaaminiyo Wasiiru dowlaha Warfaafinta,Isgaarsiinta,hiddaha iyo dhaqanka Puntland C.Fitaax Nuur Ashkir oo ay ku weheliyaan Agaasimaha guud TVga iyo Raadiyaha Puntland,Agaasimaha guud Ee Wasaaradda,ayaa saaka la kulmay Safaaradaha dalalka Masar iyo Italy.
Ugu horrayn wafdigu wuxuu la kulmay Safiirka dowladda Italy u fadhiya Soomaaliya Safiir “Carlo Campanile” waxayna wafdigu uga mahadceliyeen Safaaradda Mashaariicda horumarinayd Ee ay dalka ka wadaan iyo Dhisidda TVGA iyo Radio-ga Puntland.
Wafdiga uu Wasiiru Dowlahu hoggaaminiyo waxa kale oo ay la kulmeen Safiirka dalka Masar Ee u fadhiya Somalia Safiir “Waliid Ismail” waxayna kala hadleen sidii loo dar dar galin lahaa Xiriirka Taarikhi ah Ee u dhaxeeya Puntland iyo Masar.
Waxa kale oo uu Wasiir Ashkir la kulmay “Mohamad Yousif Abdelmannan” oo ah safiirka Sudan Soomaaliya u fadhiya wuxuuna kala hadlay mataanaynta Wakaaladda Wararka Puntland iyo Suudaan iyo labada Telefishin.saxafiyiintana in loo fidiyo tababbar.
Ilaa intuu Madaxweynaha Puntland U soo magacaabay Wasaaradda Wasiiru dowle iyo Wasiir ku-xigeen Is-beddel baa la dareemayaa dhinaca dar dar galinta Hawlaha Wasaaradda oo muddo Fadhiid ahayd.